Yini ongayinika abazali ngomshado weparele? Izinhlobonhlobo eziningi zezipho
Kuyini ukuphila komndeni? Lena injabulo, nokukhungatheka, nokuthandana, nezinkinga, nothando, nokudabuka. Into esemqoka ukuphika konke kanye nenye ingxenye, ukuhamba ngezandla kuzo zonke izivivinyo ezilungiselelwe i-destiny. Iminyaka iyahamba ngokushesha, futhi uma abazali bakho sebekulungele ukugubha hhayi iJubane nje kuphela, kodwa iminyaka engu-30 yokuhlala ndawonye, bahloniphe kuzo zonke izigaba ezichazwe ngenhla. Futhi ungabongiswa - unesibonelo esihle sempilo eshadile! Kungani kubhekwa ukuthi ukugubha iminyaka engu-30 ngumshado weparele? Yini ongayinika abazali ngalolu suku olubalulekile? Masithathe konke ngokuhlelekile.
Singacabanga ukuthi lolu suku lubizwa kanjalo, ngoba unyaka ngamunye, bahlala ndawonye, kulula ukuqhathanisa nengqamuzana yesihlabathi esangena egobolondo. Kuyinto emhlabathini, embozwe ungqimba omusha we-mother-of-pearl, ephenduka iparele. Okufanayo kwenzeka emndenini, njalo ngonyaka impilo engashadile iqinisa iseli lomphakathi, yenza ibe namandla futhi inhle kakhulu. Izipho zomshado we-pearl kubazali futhi akufanele kube lula. Kubalulekile ukuthi bagcizelele ukubaluleka nobukhulu balolo suku. Ngakho-ke, yini ongayinika abazali ngomshado weparele?
Yiqiniso, umama nobaba bayokutshela ukuthi abakudingi lutho, uthando lwakho, inhlonipho nokukhathalela kuphela. Kodwa-ke, sifuna ukubajabulisa ngokuthile okuhle nakakhulu. Isipho esinjalo, njengesibonelo, njengesisetshenziswa sekhaya, sizosho ngaphandle kokunye okuphathelene nokukhathazeka kwakho. Phela, ufuna abazali bakho baphumule ngangokunokwenzeka futhi basebenze ngangokunokwenzeka futhi bakhathele. Izingane ezinothando zikulungele ukuya noma yini, uma umama nobaba kuphela bephilile futhi bejabule.
Uma ungeke ukwazi ukuthenga izindlu zasendlini noma nje ungayidingi, futhi ucabanga ukuthi yini ongayinika abazali ngomshado weparele, cabangela ukhetho lokudala i-albhamu yezithombe wena ngokwakho. Kuyoba into engakhohlwayo! Faka kuzo zonke izithombe zomndeni ozothola. Futhi ungahlela i-albhamu ngamaparele, ngisho nama-apulazi. Futhi abazali ngeke bajabule kangako ukuthola njengesethulo ividyo kliphu kusuka kumarekhodi omndeni. Izikhathi ezinhle zokuphila komndeni zingabuyekezwa okungenani nsuku zonke, khumbula yonke iminyaka yenjabulo.
Ngesizathu esithile awuthandi okukhethwa ngenhla? Ingabe usacabanga ukuthi yini ongayinika abazali ngomshado weparele? Ungakhetha imininingwane ezithakazelisayo nezangaphakathi, isibonelo, imidwebo, imidwebo, izitsha. Umama uzojabula ngolo suku olufanekisela futhi olulungile kuze kube manje, njengamapulangwe wepearl, futhi upapa uzothokozwa nge-cufflinks ngamapharele noma izikhonkwane zokubopha. Uma kuyabiza wena noma abazali bakho bengayithandi, bese ucabangela ezinye izinketho zezipho. Isibonelo, beka umama wakho isitsha sezitsha ezinhle, nobaba (ngokuya ngezintshisekelo zakho) isibalo sokudoba noma i-accessory yemoto.
Uma uvikelekile ngokwezimali, umbuzo wokuthi yini ongayinika abazali ngomshado weparele akuyona neze inkinga. Thenga umama nobaba uhambo oluya esibhedlela noma ezweni elifudumele lapho behlale bephupha ukuvakashela, kodwa kwakungekho ndlela. Cabanga ngezifiso zabo, amaphupho. Uma uqala ukulungiselela lolu suku kusengaphambili, ngakho konke okusemandleni akho, futhi nakanjani uzokwazi ukumangala abazali bakho.
Amafutha ngezandla zabo siqu: amathiphu wokusika, ukuthunga nokuhlobisa
Ukubingelela ngomshado wekotini
Iziphi izesekeli zeqembu le-hen?
"UAZ-Patriot" - Izibuyekezo wabanikazi uhlelo olusha SUV
Indlela yokuthola injongo yami empilweni? Usesho, ukuhlonza nokuqonda injongo yabo ekuphileni
Izilwane UK. Flora nezilwane ezihlukahlukene Great Britain
Izimbali Lonyaka, ukuqhakaza zonke ihlobo esizeni
Ikhekhe nge Ubisi olujiyile epanini: iresiphi ngesithombe